China Fehikibo sy mpanamboatra fehikibo | Jusheng
Misy karazany maro ny conveyor fehikibo manokana ho an'ny rafitra famahanana ao amin'ny fitoeram-bokatra, toy ny conveyor bet marindrano, conveyor fehin-kibo mifindra, conveyor fehikibo sub-feed mandeha, conveyor fehin-kibo sub-feed S, conveyor fehin-tsakafo rotary ary conveyor sub- mpampita fehikibo, izay asongadin'ny famahanana sy ny fivoahana amin'ny teboka marobe sy ny asa tsy dia kely loatra. Ampiasaina betsaka izy ireo amin'ny metallurgy, mine, station electronics, indostria fananganana fitaovana, indostrian'ny simia, indostria maivana ary rafitra fampitana hafa hanampiana hampita ireo fitaovana.
Mpitondra fehikibo fisaka
Fehikibo fehikibo (mm) fahefana hafainganam-pandeha fahafahana
Fehikibo conveyor-herringbone fehikibo fehikibo
Ny masontsivana mifandraika dia ho an'ny referansa ihany, ary ny tena fanaovana kajy dia miorina amin'ny zoro sy ny halavan'ny mpampita fehikibo!
na ary mitambatra conveyor fantsom-pifandraisana, izay asongadin'ny fanomezana sakafo sy famoahana amin'ny teboka marobe sy ny asa tsy dia kely loatra. Ampiasaina betsaka izy ireo amin'ny metallurgy, mine, station electronics, indostria fananganana fitaovana, indostrian'ny simia, indostria maivana ary rafitra fampitana hafa hanampiana hampita ireo fitaovana.
Previous: Rafitra fampifangaroana batching
Manaraka: Belt Conveyor Spare Parts
Rafitra fanangonana mitambatra, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra, Concrete Mixer Spare Parts, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Masinina mitambatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy,